Ahoana ny fandotoana amin'ny Linux | Ubunlog
Ahoana ny fandotoana amin'ny Linux
Na dia efa tsaho aza fa hoe Linux filesystems, miorina amin'ny kinovan'ny hanitatra na rafitra hafa miaraka gazety toa ny JFS, ZFS, XFS na ReiserFS, tsy mila defragmentation izy ireo, marina fa rehefa mandeha ny fotoana lasa mihisatra ny fahaizany miasa noho ny fanaparitahana ny angona. Na dia tsy dia mampientam-po velively ny fiatraikany tahaka ny amin'ny rafitra mifototra amin'ny FAT sy NTFS, zavatra iray izay azontsika vahana mora foana ao anatin'ny rafitra izany raha mampiasa fitaovana toa e4defrag.
E4defrag dia fitaovana azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux, ao anatin'izany ny Ubuntu, ao anatin'ny fonosana e2fsprogs. Betsaka ny hafa miasa amin'ny fomba mitovy amin'izany, saingy nofidinay izany noho ny fampiasana azy mora foana. Mba hametrahana azy ao anatin'ny rafitray dia ilaina fotsiny ny miantso ity baiko manaraka ity:
Raha vantany vao tafapetraka ny fonosana, dia azontsika atao ny mangataka ny fampiasana avy amin'ny tsipika fibaikoana amin'ny fanatanterahana ity fanambarana manaraka ity:
Vokatr'izany dia hahazo sary mitovy amin'ity manaraka ity isika izay manondro ny sandan'ny sombintsombin'ny singa misy anay. Raha mahatratra isa ambony noho ny 30 io isa io dia Manoro hevitra anao ny hiezaka hampihena izany amin'ny alàlan'ny fampiasana azy izay natoronay, ary raha mihoatra ny sandan'ny 56 dia ilaina ny mihetsika haingana araka izay tratra.
Mba handotoana singa iray dia tsy maintsy miantso ny fampiharana miaraka amin'ity manaraka ity isika:
Na ity iray hafa ity raha te hihetsika amin'ny fitaovana iray manontolo isika:
Mampahatsiahy anao toy izany hatrany izahay toro-hevitra tokony hofoanana ireo fitaovana na kapila ny rafitrao izay hiasanao miaraka amin'ity fitaovana ity na izay iray hafa hisorohana ny fahalovana amin'ny angona.
Farany, naMamporisika anao izahay handao ny hevitrao ary hilaza aminay izay Ity rindranasa ity dia niasa tsara ho anao ary raha nahatsikaritra ny fihatsaran'ny solosainao ianao aorian'ny fandefasana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ahoana ny fandotoana amin'ny Linux
alice nicole saint dia hoy izy:
inona no azo amin'ny fakana an'io !!! hafainganam-pandeha sa zavatra hafa?
Valiny tamin'i Alicia Nicole San
Luis Gomez dia hoy izy:
Salama Alicia, marina tokoa, ny toerana misy ny angon-drakitra dia mahatonga izany fa ny lohan'ny kapila ihany no misambotra ny fampahalalana izay hampiasaina taty aoriana ary noho izany dia voadona ireo pejy fahatsiarovana izay hampiasaina. Midika amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa izany.
Valiny tamin'i Luis Gómez
alicia nicole san dia hoy izy:
Ahoana no fomba handotoako ny ubuntu raha ity fitaovana ity no ampiasaina. Voalaza ao fa tsy maintsy esorina io, tsy azoko
Valio amin'i alicia nicole San
Salama Alicia, avereno jerena ny baiko an-tampony ary apetaho amin'ny kapila na fitaovana azonao alefa. Ohatra iray mahazatra amin'ny umount ny CDROM: umount / dev / cdrom.
RioHam Gutierrez Rivera dia hoy izy:
Ao amin'ny Windows, ny defragmenting dia manampy amin'ny fitadiavana rakitra haingana kokoa. Alao an-tsaina ny talantalana feno boky, miaraka daholo. Ny fanesorana iray dia mamela banga. Mitranga izany amin'ny kapila mafy rehefa mamafa rakitra iray isika. Izany dia misy fiatraikany fa miadana kokoa ny rafitra noho ny fandaniany fotoana amin'ny fikarohana, eny fa na dia amin'ireo banga ireo aza. Defragmenting dia manangona ny vaovao fa tsy foana. Amin'ny Linux dia tsy miteraka fiatraikany lehibe toy ny amin'ny Windows. Fa mety ho tsara raha efa ela no nampiasaintsika.
Mamaly an'i RioHam Gutiérrez Rivera
oh ... azoko tsara misaotra. raha nanana fahalalana aho fa tamin'ny windows. fa amin'ny linux dia misambotra ahy haingana be noho ny linux izy .. na dia rehefa mandeha ny fotoana aza dia maka miadana kely tsy toa ny windos izao dia miadana be aho mieritreritra fa ho an'ny eindoes 🙂 nametraka ny disk win sy linux aho. misaotra amin'ny vaovao
fedu dia hoy izy:
Manana memoire kingston usb 3.0 aho taloha izay nametrahako ubuntu, fa indray andro tsy fantatro izay nitranga, raha io no nesoriko ny memoara nefa tsy noporofoiko izy na tsy haiko fa nanomboka tamin'io andro io dia "mamaky fotsiny" ary nanomboka teo dia nitety ireo pejy aho mba hahitako raha azoko averina io memoara io (satria usb 3 hafainganam-pandeha izany) fa tsy misy, hoy ny filazan'izy ireo any Espana «na de na», mba misy mahay manamboatra io, na farafaharatsiny manazava ny fomba hisorohana izany tsy hitranga intsony?
Mamaly an'i Fedu
Rowland Rojas dia hoy izy:
Efa nanandrana mamafa ny tahirin-kevitrao tamin'ny Gparted ve ianao?
Valiny tamin'i Rowland Rojas
dextreart dia hoy izy:
Misy fomba maromaro ahafahanao mampiasa rindrambaiko napetraka antsoina hoe Open Disks ary mankany amin'ny USB izay ao anatiny ianao ary manome azy fomat, safidy hafa dia amin'ny alàlan'ny terminal.
Valio ny dextreart
Miguel Angel Santamaría Rogado dia hoy izy:
Miala tsiny aminao aho milaza aminao fa somary tsy marim-pototra ilay lahatsoratra.
Amin'ny lafiny iray, tsy ny fotoana izay miteraka fisarahana amin'ny rafitra fisie, fa ny lamina fampiasana: mamorona fisie kely an'arivony ary avy eo mamafa ny kisendrasendra, manoratra rakitra be dia be miadana, sns.; ary ny habetsaky ny fipetrahana ny fisie filesy, ny fampiasana mihoatra ny 90% dia voalaza ho teboka iray izay tsy ahaizan'ny filesystem manalefaka ny fizarazarana (na dia mbola tsy nahita fanazavana ofisialy momba an'io 90% io aza aho).
Etsy ankilany, novaina ny baiko napetrakao: ny "e4defrag -c / path" dia mampiseho ny fampahalalana (fanisana) momba ny fanaparitahana ary ny "e4defrag / path" no manao ny defragmentation.
Ho famaranana dia avelako eto  lahatsoratra iray izay manazava lohahevitra tsotra be pitsiny toy ilay fizarazaran-drakitra rakitra; Nanomboka ny taona 2006 izy io ary tsy miresaka firafitra na fomba toa ny "extents" na fanosihosena an-tserasera, saingy mora azo izany.
PS: Noho ny fitiavana te hahafanta-javatra fotsiny, hanondroana fa rehefa afaka herintaona sy tapany ny fampiasana ary tsy misy fanimbana na inona na inona karazana, ny rafitrao dia manana sombina 0% vaovao amin'ny fampiasana 79% (Ubuntu 14.04).
Valiny tamin'i Miguel Ángel Santamaría Rogado
Salama Miguel Ángel, voalohany indrindra, misaotra anao noho ilay naoty. Manova ny fehezanteny aho izao. Araka ny voalazanao tsara, ny lamina fampiasana ary na eo aza izany, ny safidin'ny cluster na ny haben'ny sakana, dia hametraka io fihetsika io ao amin'ireo singa ao aoriana. Satria tsy azo jerena mialoha raha manana rakitra kely maro na rakitra kely sy lehibe ao amin'ny tarika misy antsika dia matetika no raisina ny sanda default izay zakan'ny rafitra.
Etsy ankilany, ambarao fa ny fahazoana defragmentation dia tsy dia be loatra amin'ny fampifangaroana ny fampahalalana fa amin'ny filaharana tsara arahan'ny fampahalalana. Arakaraka ny maha kely ny lohan'ny disk no mitsambikina, vao mainka ho azontsika ny hafainganana (ary amin'ny ankapobeny dia mety hitranga amin'ny fisie marobe ary misy sakana misesy noho ny amin'ireo bitika kely hita tampoka ao anaty kapila).
zytumj dia hoy izy:
Torohevitra feno / tsara indrindra 276635/270531
Haben'ny salan'isa isan-karazany 252 KB
[0-30 tsy misy olana: 31-55 sombina kely ihany: 56- mila defrag]
Ity lahatahiry (/) ity dia tsy mila defragmentation.
Manodidina ny 3 taona ny solosaina fa tsy ratsy mihintsy, sa tsy izany?
Mamaly an'i zytumj
Ny sombin-javatra dia saika tsy misy, dia ara-dalàna ao amin'ireo rafitra fisie ampiasaina amin'ny Linux, "heverina fa" hialana amin'izany izy ireo.
Tena tsy mendrika ny defragmenter amin'ny Linux, ireo fitaovana ireo dia sanatria raha mila manao karazana fanovana habe amin'ny partitions ianao, mba tsy hanana rakitra amin'ny faran'ny fizarazarana izay tsy mamela anao hanova ny habe.
PS: Tsy nolazaiko teo aloha ary tsy toy izany koa ilay lahatsoratra, fa raha manana kapila SSD ianao, mandany fotoana ny fandotoana fotoana na inona na inona ny rafitra rakitra ampiasainao.
Misaotra an'i Miguel Ángel.
Tsia, kapila nentim-paharazana no ampiasako. Toy izany koa, rehefa nanomboka tamin'ny GNU / Linux aho tamin'ny 2008, dia efa nitady ny fomba fanaovana defragment ary novakiako fa tsy nilaina izany.
tsy fantatra fantsona dia hoy izy:
Satria izy ireo mikasika ny lohahevitr'ireo rakitra nozaraina nandritra ny fizarazaran-tany ary heverina fa hampihena ny fizarazarana. Nomarihako fa ny fampiasana rindranasa an-tsary toa an'i Defraggler na hafa avy amin'ny windows ho an'ny fizarazarana NTFS amin'ny HDD, imbetsaka izy ireo dia tsy afaka defrag ampy, ary rehefa manao izy ireo, dia mety misy rakitra sisa tavela amin'ny faran'ny fizarana.
Manontany tena aho raha amin'ny Linux dia mety misy sisan-javatra 0% amin'ny fizarazarana Ext4, fa misy koa ireo rakitra manakaiky ny faran'ny fizarazarana, izany hoe, mankany afovoany dia misy habaka banga.
Heveriko fa ny idealy fitahirizana angon-drakitra amin'ny fizarazaran-tany dia ny fitahirizana ny angona mankany afovoan'ny fizara mankany ivelany. Inona ny hevitrao?
Valiny amin'ny fantsona tsy fantatra
Salama. Ary ahoana no ahafahako mandoto partitions NTFS na FAT32? MISAOTRA
Valiny tamin'i Leonpardo
Salama daholo! Nampiasa Ubuntu nandritra ny taona maro aho ary mbola tsy naharitra ela akory, tiako ilay izy. 10 segondra hanombohana ary 3 hikatona. Miarahaba anao!
elianne dia hoy izy:
Miara-miasa amin'ny mpanonta telo aho ary tsy misy amin'ireo telo azoko apetraka amin'ny Ubuntu 20.04, efa nampidina ireo mpamily ho an'ny tsirairay amin'izy ireo aho. vaovao ny pc ary apetraka fotsiny ny ubuntu. tamin'ny pc teo aloha izay tsy maintsy nariako satria tsy natomboka (initramsf) ary tsy nisy afaka nanamboatra azy io dia niasa tsara daholo ireo mpanonta telo. ny mpanonta dia epson roa ary iray hp.
lsb dia tsy misy ao amin'ny ubuntu 20.04
Mamaly an'i elianne
Ahoana ny fametrahana Kodi 15.2 amin'ny Ubuntu 15.10
Ry Royal-Gtk, omeo endrika fisaka mahasosotra ny Ubuntu